Qatar Airways iyo Air Canada ayaa kala saxiixday heshiis codeshare ah
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Qatar Airways iyo Air Canada ayaa kala saxiixday heshiis codeshare ah
Airlines • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Qadar • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Kanada • News • Dalxiiska • Gaadiidka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Qatar Airways waxay ku faraxsan tahay inay ku dhawaaqdo inay dhameystirtay heshiis koodhere ah oo lala galayo Air Canada oo ku habboon safarka u dhexeeya Doha iyo Toronto. Iibka wuxuu kubilaabmay duulimaadkii ugu horeeyey ee codeshare inuu shaqeeyo laga bilaabo 15ka Diseembar 2020. Heshiiska wuxuu xoojinayaa ballanqaadka muddada dheer ee Qatar Airways ee rakaabka Canada, iyo kor u qaadista isku xirnaanta adduunka ee Kanada si loo taageero soo kabashada dalxiiska iyo ganacsiga.
Rakaabka Qatar Airways Rakaabku hadda waxay ku raaxeysan karaan isku xirnaansho la’aan, hal-joogsi iyo joogsi toona iyada oo loo marayo Toronto iyada oo loo sii marayo Madaarka ugu Fiican Bariga Dhexe, Hamad International Airport. Rakaabka Air Canada waxay ka faa'iideysan doonaan inay awoodaan inay qabsadaan safarada duulimaadyada Qatar Airways ee u dhexeeya Toronto iyo Doha iyo wixii ka sii dambeeya in ka badan 75 meelood oo Afrika ah, Aasiya iyo Bariga Dhexe.
Madaxa Fulinta ee Qatar Airways Group, Mudane Mr. Akbar Al Baker, wuxuu yiri: “Waxaan ku faraxsanahay in aan helno heshiiskan istiraatiijiyadeed ee codeshare ee lala galayo Air Canada si aan u siino safarradeenna safar aan kala go’ lahayn oo aan ku tagno kana soo gudubno Toronto heer sare oo heer sare ah. farshaxanka iyo diyaaradaha waara, amniga, raaxada iyo adeegga dusha. Heshiiska wuxuu kordhin doonaa xulashada kumanaan rakaab ah wuxuuna u oggolaanayaa isku xirnaanta habsami leh tiro aad u tiro badan oo tagayo cusub - gaar ahaan Afrika, Aasiya iyo Bariga Dhexe. Iyada oo laga faa’iideysanayo awooddeena dhameystirka, heshiiskan wuxuu sidoo kale bixin doonaa faa iidooyin si looga caawiyo soo kabashada safarada caalamiga ah. ”
Qatar Airways ayaa bilowday duulimaadkeeda Canada bishii Juun 2011 iyada oo saddex duulimaad oo toddobaadle ah ku tagaysa Montreal taas oo ballaadhisay afar toddobaadle bishii Diseembar 2018. Shirkadda diyaaradda waxay si dhow ula shaqaysay dawladda Kanada iyo safaaradaha ay ku leedahay adduunka oo dhan aafada, iyada oo si kumeelgaar ah u shaqaysa saddex adeeg oo toddobaadle ah. Toronto marka lagu daro duulimaadyada kirada ah ee loo maro Vancouver si ay gacan uga geysato keenista in ka badan 40,000 oo rakaab ah Kanada
Dhamaadka Xilliga Jiilaalka IATA, Qatar Airways waxay qorsheyneysaa inay dib u dhisto shabakadeeda 126 meelood oo ay ka mid yihiin 20 Afrika, 11 Ameerika, 42 Aasiya-Baasifik, 38 Yurub iyo 15 Bariga Dhexe. Magaalooyin badan ayaa loogu adeegi doonaa jadwal xoog leh oo leh maalin kasta ama ka badan mowjadaha.